Arsene Wenger oo sharraxay sababta ay Liverpool u dhibtooneyso
Home Horyaalka Ingiriiska Arsene Wenger oo sharraxay sababta ay Liverpool u dhibtooneyso
Liverpool natiijooyinkeedii liitay ayaa keentay in kooxda Jurgen Klopp ay qarka u fuulaan inay ka haraan boosaska Champions League ee kala sarreynta Premier League.
Reds ayaa hogaanka u heysay miiska kala sareynta ee xiliga Kirismaska ​​ka dib markii ay 7-0 kaga badisay Crystal Palace meel ka baxsan garoonkooda, laakiin waxa ay heleen kaliya 9 dhibcood 10 kulan oo ay ciyaareen tan iyo haatan, waxaana ay haatan 13 dhibcood u jiraan kooxda hogaanka heysa ee Manchester City – kuwaasoo iyagana kulan ku leh. gacanta.
Dhawaan, tababaraha halyeeyga ah ee Arsenal Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday inuu rumeysan yahay inay lumisay hoggaamiyihii Liverpool ee daafaca Virgil van Dijk, iyo doorka ku meel gaarka ah ee Jordan Henderson ee daafaca dhexe, taas oo horseedday hoos u dhaca.
“Mid ka mid ah sababaha ugu waa weyn, xaqiiqdii, waxay aheyd inuu waayay Van Dijk,” ayuu yiri Wenger . “Maxay ahayd awoodoodu waxay ku guuleysanayeen kubada sare, iyadoo [Jordan] Henderson iyo [James] Milner ay khadka dhexe ka ciyaarayeen. Markii ay dib u celiyeen Henderson iyaguna sidoo kale way lumeen.”
Liverpool ayaa la dhibtooneysay walwal dhaawacyo xilli ciyaareedkii oo dhan waxaana ay aheyd inay si weyn ula qabsadaan ka dib markii ay waayeen seddexdii daafac dhexe ee waa weyn – Virgil van Dijk, Joe Gomez, iyo Joel Matip – dhaawacyo muddo dheer ah.
Previous articleKylian Mbappe oo go’ansaday waqtiga uu ka tagayo kooxdiisa Paris Saint-Germain
Next articleBayern Munich oo kula dagaalameysa Manchester United daafaca midig ee Norwich City